FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SCHNAU-TZU - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Schnau-Tzu
Alika kely mifangaro Schnauzer / Shih Tzu mifangaro
Lucky the Schnau-Tzu amin'ny faha-2 taonany— 'Nahazo vintana izahay fony izy iray volana sy tapany izay satria izy no mpianakavy tsara indrindra azontsika nangatahina.'
Retriever volamena 8 volana
Ny Schnau-Tzu dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Miniature Schnauzer ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Ashton (ankavia) sy Ashley (ankavanana) aseho eto amin'ny 2 1/2 volana. Ny masin'izy ireo dia madio Shih Tzu ary ny damandrin'izy ireo dia madio Schnauzer . Ashton sy Ashley dia nahazo ny vaksiny voalohany tamin'ny faha-2 taonany sy ny taovolony voalohany roa andro taty aoriana. Samy mamy sy mahafinaritra tokoa izy roa. Tian'izy ireo foana ny milalao ny kilalaon'izy ireo, indrindra rehefa avy misakafo. '
Ashton (ankavia) sy Ashley (ankavanana) aseho eto amin'ny 2 1/2 volana.
Brusier the Schnau-Tzu (Schnauzer / Shih Tzu mix dog) - 'Brusier dia nantsoina tamin'ny alàlan'ny alika Brusier any Legally Blonde. Brusier dia 10 volana eo ho eo amin'ireo sary ireo. Ity no alika voalohany izay tena nananako ary 37 taona aho. Ity koa no alika voalohany izay efa hitan'ny zanako vavy koa, ary 15 taona izy. Raha fantatro fa nahafinaritra ny alika io dia ho nanana iray be aho vetivety. Tsy nanantena ny hamaky trano azy aho fa raha ny marina dia tsy dia ratsy loatra satria nahalala haingana izy. Nanontany tena aho avy eo raha hanandrana hitsako ny zava-drehetra izy. Tsy afaka milaza aho hoe izy no tsara indrindra tsy nanandrana mitsako zavatra, fa fantany izay azy sy izay tsy azy. Brusier dia toa ny filazan'ilay famaritana azy fa milalao izy, tsy mivadika ary tia miaraka amiko sy ny zanako vavy. Tiany koa ny mitondra mitaingina ary apetaho eo am-baravarankely amin'ny lohany ny lohany mba hahatsapa ny rivotra. Tiany ny mandehandeha ary saika mandeha am-piavonavonana mihitsy aza izy rehefa mandeha amin'ny sisin-dalana eny amin'ny manodidina anay ka miteny hoe 'jereo aho. Matory miaraka amin'ny zanako vavy eo akaikin'ny fandriany izy na miaraka aminy eo am-pandriana. Tiako izany fa tsy nalatsany, toy ny tsy nilako alika nandatsaka. Manaraka anay manodidina ny trano izy mba hahazoana antoka fa tsy 'manadino' na inona na inona izy. Handry ihany koa izy rehefa mandry isika. Tsy mahalala na inona na inona momba ny fanaovana fetsy alika izahay, fa aleoko afaka mianatra zavatra tsara. Mahafantatra teny marobe lazainay izy ary namboariny ho fantatra rehefa miomana hivoaka ny trano izahay. Tamin'izay no nahazoany ny tsara indrindra ny tavany zanak'alika kely malahelo. Tsy afaka miteny aho hoe tia fandroana fa alainy tsara. Ny tiany dia mihamaina amin'ny volo mitsoka. Rehefa mandeha miaraka aminy isika toa ny PetSmart dia lazain'ny olona fa mahafatifaty be ny endriny ary alika tsara tarehy izy. '
Brusier the Schnau-Tzu (Schnauzer / Shih Tzu mix dog) eo amin'ny 10 volana eo ho eo
'Ity i Rex. Antsoinay koa hoe Rexy. Enim-bolana izy izao ary 2 sentimetatra ny halavany noho i Shih Tzu zanako feno, saingy mitovy ny halavany. Hendry izy ary mahay mipetraha, mandry ary miakara hitsaboana. Miezaka mampianatra azy hifandray tanana aho. Tiany ny any ivelany, tsy toy ny ahy Shih Tzu ary tena milalao indrindra amin'ny alika hafa. Rehefa eo am-pelatanan'ny alika hafa izy dia tsy fantany fa malemy izy raha manandrana manaraka azy. '
Pitbull mena mena 3 volana
Rex the Schnau-Tzu puppy ( Mini Schnauzer / Shih Tzu afangaro ny karazany) amin'ny 6 volana
Rex the Schnau-Tzu puppy ( Mini Schnauzer / Shih Tzu mifangaro karazany) amin'ny 2 volana
Coco ilay Schnau-Tzu (Schnauzer / Shih Tzu mix mix) maro loko amin'ny faha-7 taonany manao lobaka
Lisitry ny alika kely mifangaro Schnauzer mifangaro
Lisitry ny Dogs Hybrid Schnauzer
tapany doberman antsasaky ny mpiandry ondry alemanina
mpiandry aostraliana irlandey wolfhound mix
shar Pei pitbull afangaro sary
fifangaroana poety sy kilalao
shiba inu australian omby omby mifangaro
sarina zanak'alika pitbull mainty sy fotsy
chihuahua sy rat terrier mix